सौन्दर्य र स्वास्थ्य लोक व्यञ्जनहरु को Piggy बैंक
अचम्मलाग्दो रूपमा धैर्य वसा को उपचार गुणहरू लामो समयको लागि चिनिन्छन्। कत्तिको फाइदा उठाउन मद्दत गर्ने प्रश्न सोध्नु, हामी विश्वव्यापी रूपमा भन्न सक्छौं कि यो एक सय भन्दा बढी वर्षका लागि लोक चिकित्सामा प्रयोग गरिन्छ। प्राचीन समयका कारण, यो विभिन्न रोगहरूको उपचार गर्न प्रयोग भएको छ।
कस्ता रोगहरूले बोसो बोसो मद्दत गर्छ?
कुन कुराले चाँदीलाई फाइदा पुर्याउँछ भन्ने प्रश्न, परम्परागत औषधिहरूको प्रशंसकहरूसँग धेरै सान्दर्भिक छ। तथापि, यो ध्यान दिनु पर्छ कि यो औषधि पहिले देखि नै वैज्ञानिकहरु द्वारा जांच गरिएको छ। तिनीहरूले पुष्टि गरे कि यो प्राकृतिक उत्पादन यस्तो समृद्ध रचना छ जुन यसको प्रयोगले पुरानो बीमारहरू पनि निको पार्न सक्छ, र यो उत्पादन व्यावहारिक रूप देखि कुनै साइड इफेक्ट छैन। यसकारण, परम्परागत औषधिले यो उत्पादनको औषधीय गुणहरुलाई मान्यता दिन्छ।
समस्याको आधारमा, मर्मत बसाई बाह्य र आन्तरिक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो घाव, अल्सर र शीतबाइट निको पार्न प्रयोग गरिन्छ। यसबाहेक, यो उपाय एक पुनर्जन्म प्रभाव छ र चोट र कटौती देखि निशान र अंकहरु लाई हटाउन सक्षम छ।
जब एक व्यक्ति चिसो वा फ्लुबाट लामो समयको लागि रिक्त हुन सक्दैन, तेललाई उद्धार गर्न आउनेछ। यस्तो रोगले, उहाँले सजिलै संग प्रबन्ध गर्दछ। यो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया उपचार गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ।
गाउटको साथमा फ्याँस्न पाउनेछ?
मालुकोलोक्कोलटल प्रणालीको रोगले, तेललाई अपरिहार्य सहायक बन्छ। गाउट, गठिया, ओस्टियोकोन्ड्रोसिस, गठिया , रेडक्रसिसन र ट्रामाको साथ, चिसो गम्भीर स्थानमा घुम्न र न्यानो लोभमा लिपि गरिन्छ। फैट रक्त परिसंचरण बलियो बनाउँछ र समस्या क्षेत्रमा पोषक तत्वहरूको पहुँच बढाउँछ, जोडिहरु को राम्रो गतिशीलता प्रदान गर्दछ।
भाडा वसा को लाभ र हानि
बियर को तेलले धेरै भिटामिन र खनिजहरू समावेश गर्दछ। मदिरा बोसो को प्रयोग भनेको लिनु हो, यो शरीरले राम्रोसँग अवशोषित गर्दछ। बिरुवा तेल पनि प्रयोगको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसले पूर्णतया प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ, रक्तचाप normalize र सकारात्मक तंत्रिका तंत्रलाई असर गर्छ।
वास्तवमा हरेक औषधिसँग धेरै सङ्घर्षण छ र बाबाले सबैलाई फाइदा लिनु भनेको अपवाद होइन, त्यसैले केही अवस्थामा यसको प्रयोग सिफारिस गरिएको छैन। तीन वर्ष, गर्भवती र ल्यापटप, साथसाथै व्यक्तिगत असंतोष संग बच्चाहरु भित्र नपुग्नुहोस्।
गेसस्टोन - अनुप्रयोग
लुगाफाडको एलर्जी - लोकविधिहरु द्वारा उपचार
गोल्डन जड - अनुप्रयोग
वैटेब्रल हर्निया - लोक उपचार संग उपचार
Hofitol - प्रयोगको लागि संकेत
सेडर अखरोट तेल - उपयोगी र औषधीय गुण
दूध थिस्टल - प्रयोग
टुई तेल - आवेदन
हेमोस्टेटिक जडी बूटियों
Tavolga - औषधीय गुण
कालो नट थम्बनेल
जोड़हरू उपचारको लागि लिलाक को ट्रेमर - पर्चा
नमक द्वारा खराब को हटान
पिक को कान - नुस्खा
पेडीक्योर - फैशन ट्रेन्ड 2015
देश शैलीमा परिदृश्य डिजाइन
एक कुरामा Privorot
टाउकोमा सुन्दर सिरकाहरू
ऊब्रेको सेतो ऊनहरू
आफ्नै हातबाट ढोकाको असबाब
रजोनिवृत्ति पछि सेक्स - रजोनिवृत्ति को समयमा यौन सम्बन्ध को विशेषताहरु
अन्डा संग म्याकारोनी
ओचेकिकीकी एक मुहर संग महसूस - एक कदम-दर-चरण मास्टर वर्ग
एक साथ गाली र कान एक साथ - एक चिन्ह
डर्मेटाइटिस कसरी उपचार गर्ने?
Lymphadenitis - लक्षण र उपचार
छोटो बुना भयो स्वेटर
मुखमा स्टमटाइटिस कसरी चाँडै उपचार गर्ने?
ट्वाइलेट सेतो लगाउने के साथ?
बालवालिका - के यो आवश्यक छ?